Kwiminyaka engama-500 eyadlulayo, kwanokuba i-blondes ayinakukwazi ukudlala ngothando, ithi: "Ndine-cretinism yezobugcisa! Andizange ndiyifumane kwimithi apho ndihlala ndifihle khona." Ukukwazi ukuhamba kuloo minyaka emihle kwakuyimfuneko yokuphila, ngoko Kwakungekho ixesha lokudlala isilumko-kufuneka udibane neenkwenkwezi, ngoko ke nge-moss, ukuba ufumane ukusuka kwinqanaba A ukuya kutsho B. Kwaye, kufuneka kuphawulwe, abafazi benza kakuhle. Ukuguqula amadoda abe ngama-superhumans, njengesiqhelo, amadoda avinjelwe. ivnye amakhadi, bona wasisindisa (kwaye nam) ngemfuneko ukucinga ngokwabo kwaye oku isiphumo :. nyaka ngamnye abantu abaninzi ngakumbi abafumana uphaphazele ukuba navigation yabo imoto okanye smartphone lwaphela ngesiquphe.
Ngaphandle kwevili lokuhamba kwaye kungekho moya
Iindaba ezilungileyo kukuba bonke abantu, kungakhathaliseki ubudala babo, inkolo kunye neenketho zecilinary, baneenkcukacha "zengqondo" -ukukwazi ukuziqhelanisa nakwezinye indawo ezingaqhelekanga. "Iindaba ezimbi: ngenxa yokungabi nabulungisa kwimbali, ukuqondiswa kolawulo lwabasetyhini aluphuhlisi kunye namadoda. : ngelixa abavuni, bexhamla amahlathi ekufuneni ukutya, bahlakulele ngokufanelekileyo i-hemisphere yabo yokufanelekileyo (inoxanduva lokuhamba), abafazi bajikeleza emaphandleni, befunda ukuqaphela kodwa ulahlekelwa ithuba lokuhlakulela ingcamango yendawo. Ngenxa yoko, ngamawaka eminyaka, abameli besondo esomeleleyo basebenza ngokubanzi kunye neendawo zomhlaba jikelele ("Yiyona ibha yezemidlalo ebhetele kwimpuma-mpuma ye-Alsace"), kunye nabasetyhini kwimizamo yabo yokuzimisela ukulungelelanisa badla ngokusebenzisa imiqondiso yeendawo kunye neziqhelo eziqhelekileyo eziqhelekileyo. phakathi kwevenkile, apho ihlala ihlala khona, kunye ne-cafe eyithandayo ").
Iingcali zenzululwazi zaseJamani zifumene enye inkcazo yobunzima besifazane ngokuziqhelanisa nomhlaba: ngokusemzimbeni wakho, ngokungafani nendoda, ayinayo eyaneleyo ye testosterone - ihomoni, ephakathi kwezinye izinto, ichaphazela nokukwazi ukufumana iindlela ezifanelekileyo. Akukho nto inokukuthuthuzela ngayo kunye nomncedisi oncedisayo we-psychiatry uVeronica Bobot waseYunivesithi yaseMcGill: ngexesha lokujonga ixesha elide wafumanisa ukuba ngokuphonsa amakhadi ephepha kunye nokuxhomekeka kwizinto zobugcisa, uqobo wonakalisa uhlobo lwesithintelo esikunike sona ngokwemvelo. Ukubona kuphela isikrini somqhubi we-GPS, kwaye ungayithobeli ingqalelo ekhoyo, abantu banamhlanje banomngcipheko wokubangela ukunciphisa kwi-hippocampus yabo-inxalenye yengqondo ejongene nokuqhelaniswa kwendawo kunye nememori yesikhathi eside. Nangona kunjalo, yonke into ayilahlekanga: ukwenzela ukubuyisela ubuchule bendalo bovavanyo, benzise.
Qwalasela umkhondo wakho wangaphakathi kwaye umise, ekugqibeleni, ulahleke ebomini kuya kukunceda utyeshe.
Ngaphambi kokuba uye kwindawo ethile yokuhamba, kufuneka ufunde imephu yendawo, iimpawu zendalo.
Ukuba ulandela imihla ngemihla ngendlela efanayo yomntwana ukuba asebenze, zama ukwenza umehluko ebomini bakho - indlela emitsha, ngandlela-thile uvuselele isipho sakho sobugcisa.
Shintsha i-angle yokujonga
Ukuba uhlala ulahlekelwa yimoto yakho kwindawo yokupaka, zama, ngelixa uhamba emnyango wesitolo, jonga emva kwintando yakho yonke imizuzwana engu-15. Ukubona imoto evela kwiindawo ezihlukeneyo kunye nokuvavanya isikhundla sayo malunga nezakhiwo kunye nemithi, uya kuphinda ukhumbule emva koko uza kukulinda.
Jonga phambili kwiiKedetals
Kubalulekile ukunyamekela iinkcukacha ezahlukeneyo. Mhlawumbi uhlobo oluthile lomnandi okanye umthi okhethekileyo.
Ukuhamba kwintsimi engaqhelekanga, qaphela ukuba ungakanani ixesha ochithayo ukuze ufikelele kwisitoreji, intambo, iindlela ... Kwakhona kuthatha ixesha elingakanani ukubuyela endleleni.
UkuFunda yindlela efanelekileyo yokuhlanganisa ulwazi malunga nendlela, ngokukodwa ngamantombazana aneendlela eziqhelekileyo. Pokazhiteshsya kwindawo entsha kuyo, zama ukucinga ibali, usebenzisa izinto ezizayo.
Ukuze ungaphumeleli kwisixeko esingaqhelekanga, umzekelo, ukuqala, ngosuku lokuqala kufuneka ukhethe indlu ekhethekileyo, isitrato okanye indawo "ngesiseko" sakho. Ngokuqhelekileyo ubuyela kule ndawo "ekhaya" ngexesha lokuhamba, ngokukhawuleza uzakufumana entlokweni yakho imephu yengqondo yeso sixeko.
Ukuba ufumana kwindawo engaziwayo okanye kwenye idolophu, ufotoze zonke izitrato ezintsha. Uya kubeka ingqalelo ezintweni ezincinci, kwaye nakwiimifanekiso ezithathwayo ungayifumana indlela ebalulekileyo.
Abantu abanekhono lokuziqhelanisa nabo ngokuqhelekileyo banamahlazo ekucingeni ukuba kuya kufuneka bahambe ngeendlela ngendlela engaziwayo. Kwaye benza okubi ngakumbi. Xa abantu besoyika, baqala ukuhamba ngokukhawuleza. Ngenxa yoko, indlela ephosakeleyo ihlala ikhethiweyo.
Indlela yokuhlala ujabule kwaye ukhuphe ukucindezeleka
Indlela yokwenza abahlobo kwisixeko esitsha?
Ingxabano nabazali emva kokuqhawula umtshato
IPasta kunye nemifuno
Unokukhetha njani umatila webala lokulala?
Iibhisikidi ezinama-crispy kunye nesinamoni
Indlela yokukrazula iingcamango ezinzulu?
Ifotyi ye-Pickled honey
Yiyiphi imamelo efanelekileyo yokulala
Indlela yokwandisa umphumo wokukhutshwa kweenwele?
Iipancake ezenziwe nge-zucchini